Qorshaha arimaha gaarka ah - Tenants Victoria
Qorshaha arimaha gaarka ah
Waxaa ka go’an ilaalinta xuquuqdaada
Ururka Kireystayaasha Victoria (TUV) waxaa ka go’an inay u isticmaalaan macluumaadkaaga si masuuliyad leh. Waxaa na hogaamiya Australian Privacy Principles, iyo sidoo kale codes and standards kale ee aan raacno.
Qorshaha Arimaha gaarka wuxuu kaa caawinayaa inaad fahamto sababta iyo sidaan u ururino oo aan u isticmaalno macluumaadka shakhsiyeed, iyo waxaad sameyn lahayd haddii aad su’aalo qabto, cabashooyin iyo waxaad saluugsan tahay. Waxaanu wakhti wakhti cusbooneysiinaa qorshaha, sidaas oo aannu ku qorno taariikhda isbedelkii ugu danbeeyey lagu sameeyey bogga xaggiisa hoose).
Xasuuso, inaad kontoroosho macluumaadka shakhsiyeed ee aan kaa heyno.
Xaaladaha kale badidooda, adiga ayaa dooranaya macluumaadkaad na siinayso, waana bedeli kartaa ama isticmaali kartaa faahfaahintaan wakhti kasta.
Macluumaadkee ayaan ururinaa?
TUV waxay si joogta ah u weydiisaa macluumaad naga caawinaya inaan kula shaqeyno. Tusaale si aan uga shaqeyno deeqdaada oo aan kuu siino warqada lacag qabashada, ama aan u diiwaangelino taageeradaada codsiga ama warqada ku socota xubinta Baarlamaanka. Adigaa doorashada iska leh inta macluumaad ah ee aad bixineysid (si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa inaanu awoodin fulinta codsigaan haddii aadan bixin macluuaadkaka qaarkiis).
Xagga hoose waxaa ku qoran waxoogaa tusaalayaal macluumaad oo ah kuwaan inta badan ururino:
Faahfaahinta shakhsiyadeed, sida magaca ama taariikhda dhalashada
Macluumaadka lacag bixinta ee deeqaha
Fekradaha iyo xiisahaba
Taageeradaada shaqadeena, sida saxiixida codsi, martiqaadida munaasabad ama ka qayb qaadashada mashruuc
Meelaha kale ee shaqadeena ee laga yaabo inaad xiisayso taageerideeda
Xiriirka isgaarsiineed ee aad doorbideyso
Wada hadalka taleefanka ah ama iimeylka ee shaqaalaheena iyo iskaa ku shaqeeyayaasha
Xaaladaha badidooda, waxaan kuu (tusaale in lagu weydiiyo buuxinta kubanka deeqda, ama in laguu soo diro xograadin), si kastaba ha ahaatee macluumaadka qaarkiis waxaa loo ururiyaa si otumaatig ah(sida nashaad itnerneetka ah ee booqdayaasha website keena), ama il kale (sida cusbooneysiinta cinwaanka wax lagaaga soo diro Boosta Australiya, macluumaadka ku qoran buugta tusmada dadweynaha, ama u helida faahfaahinta taageerayaasha mustaqbalka ee ururada isku shaqada ah ama bixiyayaasha qofka saddexaad).
Sidee baan u nabadgelinaa oo aan u keydinaa macluumaadkaaga?
Si loo ilaaliyo macluumaadkaaga khaaska ah iyo arimahaaga gaarka ah, markaad nala soo xiriirto waxaan ku weydiin doonaa inaad caddeyso aqoonsigaaga adoo xaqiijinaya wax yar oo faahfaahin diiwaanka noogu jirta, sida cinwaankaaga, lambarka taleefankaaga, iyo lambarka arinta ama tixraaca khuseeya.
Waxaan ku heynaa badiba macluumaadkaaga shakhsiyeed keydka taageerada ama tallada, waxaana sameynaa baaritaanno iyo jeegareyn joogta ah si aan u hubinoin macluumaadka loo hayo si ammaan ah oo nabdoon. Nuqulada daabacan ee macluumaadkaaga, sida foomamka deegaha, waxaa loo hayaa si nabdoon oo loo baabiiyaa haddii aan loo baahneyn. Iskaa ku shaqeeyaha iyo shaqaalaha waxaa looga baahan yahay inay saxiixaan qorshaheena la xiriira arimaha gaarka ah, waxaana loo sameeyaa caddeymaha boliiska doorarka xasaasiga ah.
Marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa inaan u baahano inaan keydino ama ku isticmaalno macluumaadkaaga dal aan ahayn Australia, badanaa sababtoo ah mid ka mid ah nidaamyada farsamo wuxuu ku yaal ama u baahan yahay in macluumaadka lagu farsameeyo dibedda (tusaale, jannalada isgaarsiinta bulshada). Ilaa iyo wakhtigii ugu danbeeyey ee la cusbooneysiiyey qorshahaan, dalalka aan ku isticmaalno macluumaadka waxaa ka mid ah:
Sidee baan u isticmaalnaa macluumaadkan?
Waxaan ururinaa macluumaad shakhsiyadeed si aan u fulino shaqadeena muhiimka ah: caawinta iyo la hawlgalka dadweynaha, kor u qaadista wacyigelinta lacag ururinta iyo arimaha kireysiga. Si aad nooga caawiso inaan noqono kuwo war og, wax ku ool ah kartina leh, waxaan ururinaa macluumaad si aan u hubino diiwaan dhammeystiran oo sax ah adigana kugu saabsan taariikhdaada iyo la hawlgalka TUV. Tusaale, waxaan u isticmaali doonaa macluumaadka si aan kuula socodsiino wixii cusub ee aad xiiseynayso, si laguu siiyo fursado si aad u taageerto shaqada TUV, ama laguu soo wargeliyo siyaalaha kale ee aad noo caawin kartid ama aan kugu caawin karno.
Waxaan wakhti wakhti u baahan ahay mcaamiilayaal bannaanka ah si ay nooga caawiyaan waxqabadkeena, waxaana laga yaabaa inaan siino macluumaadkaaga si ay tan nooga caawiyaan – tusaale, u daabicida tiro badan oo warqado ah taageerayaasheena.
Haddii aad dooneysid qof kale inuu awoodo inuu helo ama bedelo faahfaahintaada macluumaad isagoo ku metelaya (saygaaga/sayda, wakiilka lacagta ana sharciga) waxaad nagu soo ogeysiin kartaa qoraal, waana diiwaangelinaynaa ogolaanshahan.
Wakhtiba wakhtiguu ka danbeeya, waxaa laga yaabaa inaan sidoo kale isticmaalno faahfaahintaada si aan kuugu soo dirno macluumaad anagoo metelayna ururada kale nala midka ah ee laga yaabo inaad xiiseynayso taageerida macmiil ama deeq bixiye ahaan. Faahfaahintaada lama siin doono iyaga, oo macluumaadka kaliya ee aad siiso iyaga ayaa lagu ururinayaa diiwaankooda. Haddii aad doorbideysid inaanan kuu tixgelin isgaarsiinta noocan oo kale ah, fadlan nala soo xiriir (faahfaahintu hoos ayey ku qoran tahay).
Xaalad kasta oo aan dooneyno inaan la wadaagno macluumaadkaaga qolo saddexaad, waxaan hubineynaa in taas loo sameeyo si nabdoon iyo ujeedooyinka kor ku qoran oo kaliya.
Isgaarsiinta bulshada iyo nashaadka interneetka a
Waxaan isticmaalnaa Baaritaanka Google iyo wixii kale ee aalada webserver si aan u dabagalno booqashooyinka boggeena interneetka; iyo inaan isticmaalno macluumaadkan si aan u dabagalno wax ku oolnimada boggeena interneetka, sida booqashooyinka, boogashadu intay le’eg tahay, boggaga aad eegtay iyo awooda farsamo ee booqdayaasheena. Iyadoo macluumaadkani yahay mid aan la aqoonsan Karin, marmarka qaarkood waan kugu xiriirin karnaa, tusaale ahaan bogga interneetka oo la shakhsigareeyo, ama faahfaahintaada hore ugu buuxinta foom. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ah qorshaha gaarka ah ee baaritaanka Google inay akhriso Qorshaha Arimaha Gaarka ah ee Google.
Waxaan sidoo kale isticmaalnaa qalab noo sheega marka kumbiyuutar ama aalad ay soo booqatay ama isticmaashay macluumaadkayaga, oo noo ogolaaneysa inaan ugu talagalno xayeysiinta labadaba website dadeena iyo ku xayeysiinta shabakadaha website- dada kale oo ku saleysan booqashooyinkaaga ama dhaqankaaga adoo isticmaalaya cookies ku jirta qalabkaaga. Waxaad kontorooli kartaa sida loo isticmaalo cookies iyo wuxuu maro ee sida loo sameeyey browser ka aad dooratay.
Waxaa sidoo kale laga yaabaa inaad la hawlgasho TUV adoo isticmaalaya isgaarsiinta bulshada, sida Facebook, Twitter, Instagram, iwm. Had iyo jeer waad kontorooli kartaa sidaad ku hesho macluumaadka website kasta iyo sida loo xiray. Wakhti wakhti, waxaa laga yaabaa inaan kugula soo xiriirno isgaarsiinta bulshada haddii aadan ahayn mid raaca isagoo isticmaalaya faahfaahinta diiwaankaaga, sida cinwaanka iimeylka. Haddii aad doorbideyso inaanan sidaan sameyn fadlan nala soo xiriir.
Waad cusbooneysiin karaa ama sixi kartaa macluumaadkan aan kaa ururiney ama noo sheeg sidaad doorbideysid inaan kuula soo xiriirno adoo la soo xiriiraya kooxdeena maamulka:
Taleefan: 03 9411 1444 (Isniin ilaa Jimce 9 subaxnimo – 5galabnimo, AEST/AEDT)
Warqad: Tenants Union of Victoria Ltd, P O Box 234, Fitzroy VIC 3065
Sameynta cabasho ama weydiin
Haddii aad su’aal qabto ama cabasho ku saabsan sidaan u maamulno macluumaadkaaga shakhsiyadeed ama aad jeclaan lahayn inaad ogaatid wax intaa ka badan, waxaad la xiriiri kartaa kooxda Maamulka adoo isticmaalaya faahfaahinta kore.
Haddii aad sameysay cabasho, kooxda maamulku waxay garowsan doonaan in la helay cabashadaadii, kuna siin doonaan faahfaahinta xiriirka iyo qiyaasta wakhtigay qaadaneyso iyo markay kula soo socodsiinayaa cabashadaadu meeshay mareyso
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan ilaalinta arimahaaga gaarka ah, eeg website ka OAIC
[markii ugu danbeysay ee la cusbooneysiiyey: 30/6/2014]